भारतबाट नेपाल आइ १४ दिन क्‍वारेन्टाइन बसेका पुरुषको पोखरामा निधन « Etajakhabar
प्रकाशित मिति : १९ जेष्ठ २०७७, सोमबार १७:२३
पर्वत : कोरोना परीक्षण क्रममा शुक्रबार नेगेटिभ रिपोर्ट देखिएका एक बिरामीको पोखरामा निधन भएको छ। स्याङ्जा फेदीखोला घर भएका ५१ वर्षीय ती पुरुषको उपचार क्रममा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा निधन भएको हो। शुक्रबारको परीक्षणमा उनको रिपोर्टमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि नभएको भए पनि निधन भएका कारण पुनः स्वाब लिएर परीक्षणका लागि पठाइएको अस्पतालका निर्देशक डा. अर्जुन आचार्यले बताएका छन्।
भारतबाट आएका ती पुरुष १४ दिन क्‍वारेन्टाइनमा बसेर घर गएका थिए। घर पुगेका उनमा स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि अस्पतालमा लगिएको थियो। प्रादेशिक स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र गण्डकी प्रदेशका संयोजक नवराज शर्माले कोरोनाको संक्रमण छ वा छैन? भनी पुन स्वाब संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाउन लागिएको बताएका छन्। शुक्रबार आएको रिपोर्टमा कोरोना संक्रमण नदेखिएकोले उनमा कोरोना नभएको बताउँदै शर्माले निधन कारण अन्य रोग भएको बताएका छन्।
त्यस्तै महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिकामा श्वास फेर्ने समस्याबाट आज एक गर्भवतीको निधन भएको छ । निधन हुनेमा एकडारा गाउँपालिका– २ बस्ने श्याम यादवकी पत्नी ४० वर्षीया रीतादेवी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ । आफ्नै घरमा बस्दै आएकी ती महिलालाई अचानक श्वास फेर्नमा समस्या हुँदा उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल जलेश्वरमा ल्याउँदै गर्दा बाटामै निधन भएको हो । महिलाको शव परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल जलेश्वरमा राखिएको छ ।